ISt. Helena yi-Bhritane, i-Afrika, i-COVID-Simahla kwaye ngoku iGoogle ixhunyiwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » ISt. Helena yi-Bhritane, i-Afrika, i-COVID-Simahla kwaye ngoku iGoogle ixhunyiwe
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Ukwakha kwakhona • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ngo-2018 iSt. Helena yaba yinxalenye ye-Afrika xa yabhengezwa njengelungu leBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ngo-2019.
Imiba yoNxibelelwano yayiwuthintele lo Mmandla waseBritane kuLwandlekazi lweAtlantic kwiLwandle ukuba uxhume.
Namhlanje kuphawula umzuzu kwimbali yedijithali njenge-Google ye-Equiano undersea fiber optic internet cable land kwi siqithi sase-St Helena kuLwandlekazi lweAtlantic, isenza le ndawo isemagqagaleni iBritish Overseas Territory ibe yindawo yokuqala yokuhamba kwentambo yeprojekthi ye-Equiano phakathi kweYurophu kunye nomazantsi eAfrika.
NgeyoMnga ngo-2019, urhulumente wase-St Helena (SHG) watyikitya isivumelwano noGoogle sokuqhagamshela iSt Helena Island kwisixhobo seintanethi se-Equiano undersea fiber optic intanethi, ehambisa isantya sokuqala seSt Helena, isantya se-fiber-optic.
Oku kuphawula ixesha elitsha lobuchwephesha kwisiqithi sesibini esisemaphandleni ekuhlaleni kwaye iya kuba nefuthe elikhulu kungekuphela kubomi bemihla ngemihla babahlali bendawo, kodwa kubuchule bayo bokutsala utyalomali lwangaphakathi nokhenketho.
ISanta Helena yindawo yaseBritane ebekwe kuLwandlekazi lweAtlantic.
UGoogle uqhagamshele nje iSt. Helena njenge Covid yasimahla kwiNgingqi yoKhenketho yaseBritani yaseAfrika
Ukuza kuthi ga ngoku i-COVID-19 ayaziwa kulo mmandla ukude wehlabathi.
Esi siqithi sikude sentaba-mlilo elele malunga ne-1,950 yeekhilomitha (1,210 mi) kwintshona yonxweme lomzantsi-ntshona weAfrika, kunye neekhilomitha ezingama-4,000 (2,500 mi) empuma yeRio de Janeiro kunxweme loMzantsi Merika.
Inqanawa yomaleko wentambo TeliriEphethe intambo, bafika bevela eWalvis Bay nge-31 Agasti 2021 eRupert's Bay. Ukuphela kwentambo kuye kwacothwa ecaleni kwenqanawa, kwaye abatshintshi emva koko babeka intambo kumbhobho obekwe kwangaphambili, ukuqala nge-6 kusasa namhlanje. Ukuphela kwentambo kufakelwe kwisikhululo sokumisa i-Modular Cable Landing Station (i-MCLS) eRupert's, apho intambo iya kuthi iqhagamshele kwiziseko zedijithali zesiqithi. Kwangoko kulenyanga iqela labasebenzi abalishumi elinambini lifikile ngenqwelomoya evela e-UK, eFrance, eGrisi naseBulgaria ukuququzelela ukumisa intambo kunye nokuvavanya izixhobo zokondla amandla ngaphakathi kweSitishi sokuFikela.
Intloko ye-SHG yoPhuhliso oluZinzileyo, uDamian Burns, uphawule wathi:Le projekthi iyinxalenye yeSicwangciso esiliQili seSt Helena kwaye kufuneka yenze umahluko omkhulu kubomi bemihla ngemihla babahlali bethu. Amathuba emfundo ekwi-Intanethi kufuneka aguqulwe, kuvuleke amathuba amatsha otyalo-mali, abemi beziqithi kufuneka babe nokufikelela okungcono kwiinkonzo ze-telemedicine, kwaye kufuneka sikwazi ukutsala oonothwal 'impahlana naphina ehlabathini.
Ukutsha kuya kuthi: Intambo ye-Equiano ibeka iSt Helena kwimephu yedijithali, kwaye ngeli xesha sihleli singenayo i-COVID, ifuthe lobhubhane lwehlabathi lithethe ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba sazise ngokuvalelwa kunye namanye amanyathelo othintelo kwimida yethu, echaphazela amashishini nezokhenketho kwesi siqithi. Olu suku lubalulekileyo luphawula umzuzu obalulekileyo wexesha apho sinokubona ikamva eliqinisekileyo lokuchacha kunye nokuchuma ngaphambili.
Isebe lekhebula iSt Helena limalunga ne-1,154km ubude kwaye liyakudibanisa isiqithi nesiqu esikhulu sentambo ye-Equiano, edibanisa neYurophu kunye noMazantsi eAfrika. Isantya siya kusuka kumakhulu ambalwa egigabits ngomzuzwana ukuya kwiindawo ezininzi, ngokukhawuleza okukhulu kunenkonzo yangoku yesatellite.
Intambo iya kuhamba kanye xa zombini i-St Helena yesebe kunye nesiqu esiphambili sentambo ye-Equiano zibekwe, zinikwe amandla, kwaye zavavanywa; kwaye nje ukuba iziseko zophuhliso kunye nababoneleli babekhona kwaye bakulungele ukuya kuhlala eSt Helena.
Ezi ziindaba ezimnandi nako Ukhenketho lwaseSt. Helena, ilungu le IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika